तथ्यहीन समाचारको सन्दर्भ लिँदै ओलीले फेरि प्रहार गरेर रावललाई
नेपाल लाइभ बिहीबार, माघ ८, २०७७, १५:५७
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तथ्यहीन एक समाचारको सन्दर्भ लिँदै भीम रावलको आलोचना गरेका छन्। एउटै विषयमा ओलीले रावलको आलोचना गरेको यो कम्तीमा दोस्रोपटक हो।
बिहीबार आफू निकट प्रेस संगठनको भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले भने‚ 'एउटा भर्खरभर्खर डा लेख्न थालेकाले अस्ति भाषण गरे- केपी ओलीले महिलाको किड्नी राखेको, त्यसकारण दिमाग खुस्कियो। महिलामाथि कत्रो अपमान?'
ओलीले नाम नलिए पनि उनको प्रहार भीम रावलमाथि हो भन्ने बुझिन्छ। उनले भीम रावलको पिएडी उपाधीमाथि प्रश्न उठाउँदै भने, 'लेखेका छन् डा, केमा लेखेका हुन् थाहा छैन। के विषयको डा हो‚ थाहा छैन। डा लेखेको छ तर केपी ओलीको दिमागले काम गर्दैन। किनभने किड्नीचाहिँ महिलाको राखेको छ रे। भनेपछि महिलाको किड्नीले काम गर्दैन भनेपछि, महिलाको त दिमागले झन्, मैले एउटा किड्नी राख्दा त काम गरेन भने दुइटै किड्नी भएका महिलाको दिमागले त काम गर्ने कुरै भएन। यो खालको, बुद्धिचाहिँ कहाँ छ भने डा लेखेर के गर्ने, कुन डा हो, कुन डा, केको डा हो, केको डा।
ओलीले पत्रकारहरुलाई सुझाव दिन पनि भ्याए‚ 'तपाईंहरुको बुद्धि त्यस्तो कोल्टे नपरोस्। तपाईंहरुको बुद्धि ठीक ठाउँमा जाओस्।'
यो प्रसंगको सुरुवात अघिल्लो महिनाबाटै सुरु हुन्छ। त्यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा एउटा स्क्रिन सट भाइरल भइरहेको थियो। भनिएको थियो- 'ओलीको शरीरमा स्त्री अंग मिसिएको हुँदा दिमागले काम गरेन : रावल'। नेकपाका नेता भीम रावललाई जोडेर प्रकाशित सो समाचार झुटो रहेको सार्वजनिक भयो।
सो समाचारबारे 'नेपालफ्याक्टचेक'ले सत्यता परीक्षण गरेको थियो। जसअनुसार, पुस १२ गते रावलले धनगढीमा भाषण गर्दाको सन्दर्भलाई लिएर समाचार प्रकाशित भए पनि उनले त्यहाँ गरेको भाषणमा त्यसो नभनिएको उल्लेख थियो। बरु, भिजिटर बढाउनका लागि सो भन्दै नभनेको प्रसंग थपिएको उसको भनाइ थियो।
ओलीले यही तथ्यहीन समाचारको सन्दर्भ लिएर रावलको आलोचना गरेको यो पहिलोपटक भने होइन। पुस १९ गते अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको केन्द्रीय कमिटीद्वारा आयोजित बृहत कार्यकर्ता भेलालाई कार्की ब्यांक्वेटमा सम्बोधन गर्दै ओलीले यही प्रसंगको चर्चा गरेका थिए। 'एउटा नेताले चर्को भाषण गरेछन्। केपी ओलीले महिलाको किड्नी लाएर दिमागै बिग्रियो भनेछन्', ओलीले रावलको नाम नलिई भने।
हुटिङ पाएपछि ओली झन् जोसिए र रावलको नाम नलिई व्यंग्य गर्न थाले। भने‚ 'महिलाको किड्नी लगाउँदा दिमाग बिग्रियो भनेपछि महिलाबाट जन्मिएको त्यो मान्छे पहिलेदेखि नै के होला? म त्यतापट्टि जान चाहन्नँ। महिलामाथिको कत्रो अपमान हो- महिलाको किड्नीमात्रै लगायो भने पनि मान्छे पागल हुन्छ। त्यो दिन बेलुका श्रीमतिले तिनलाई कसरी खान दिइन् होला अचम्म लाग्छ मलाई। घरमा पुग्दा ढोका खोलेर स्वागत कसरी गरिन् होला, अचम्म लाग्छ। वरिपरि छिमेकका झ्यालबाट हेर्ने दिदिबहिनी महिलाहरुको अगाडि अनुहार कसरी देखाए होलान्। अचम्म लाग्छ।'
'तथ्यहीन समाचार'को सहारामा ओलीले कार्यकर्तालाई दिलाए मनोरञ्जनआइतबार, पुस १९, २०७७
कम्युनिस्टको 'कमरेड' बिर्सेर ओली किन भन्दैछन् 'केटा'?शनिबार, माघ ३, २०७७